I-Laboratory Standardization ye-iPOCT-Izindaba-Sinocare
Isikhathi: 2021-02-22 Hits: 152
Umqondo we-iPOCT standardization laboratory ukuhlinzeka ngohlelo olufanele lwelabhoratri ngomkhawulo ophansi kakhulu wezikhungo zezokwelapha eziyisisekelo ngokuphendula okusheshayo kokuthola, izidingo zesikhala esincane, kanye nosizo lohlelo olunobuhlakani obuningi. "Ngokuya ngobuchwepheshe obusha, ungafaka ama-laboratories wokumisa i-iPOCT ngesikhala setafula kuphela."
Yize isikhala sincane, sihlanganisa iCARE-2100 biochemical, coagulation platform neminye imishini yokuhlola amadeskithophu nezinhlelo zelebhu ezihlakaniphile. Ukuhlolwa kufaka amaprotheni asebenza ngo-C, ukuzwela okuphezulu kwe-C-esebenzayo, i-amyloid A, inqubo yegazi nezinye izinto zokuvuvukala, i-glucose yegazi, i-uric acid yegazi, i-lipids yegazi, i-hemoglobin eglycosylated, umchamo i-micro-albumin nezinye izinkomba ezihlobene nezifo ezingalapheki, njenge kanye nezinkomba ezijwayelekile zamakhemikhali, izinkomba ezihlobene nezifo zenhliziyo nemithambo yegazi, njll. Ukumboza izifo ezahlukahlukene ezinjengesifo sikashukela, ukuvuvukala kokuphefumula, isifo senhliziyo, i-gout, nephritis okutholakala njalo ukuthi kuyelashwa, kuyelashwa futhi kuyalawulwa, kunikeza odokotela jikelele ubufakazi obunembile ubufakazi obususelwe futhi buxazulula amandla okuxilonga izifo eziningi.
Ngaphezu kwalokho, ngokuxhumeka okungenamthungo nohlelo lwe-HIS, umbiko wokuhlolwa kwelabhorethri ungadluliselwa ngqo ku-HER kadokotela, bese kuvulwa udonga lolwazi lokuxhumana nodokotela neziguli, ngaleyo ndlela kunciphise ubunzima bokuphathwa kwenqubo yomtholampilo. Ukuphathwa okuhlanganisiwe ngaphakathi nangaphandle kwesibhedlela, njengokuhunyushwa kolwazi ngemiphumela yesikhathi sangempela nombuzo we-akhawunti yamafu wemiphumela yomlando, kuthuthukisa kakhulu ulwazi lwezokwelapha lweziguli. "Ilungelo lihamba phambili."
Kusukela yasungulwa ngo-2002, iSinocare yathuthuka kusuka kumitha elilodwa le-glucose yegazi kanye nemichilo yokuhlola kuya kulayini ophelele womkhiqizo ohlanganisa i-glucose yegazi, i-lipids yegazi, i-hemoglobin eglycosylated, i-uric acid nezinye izinkomba zesifo sikashukela. Ukugxila emkhakheni wobungcweti, iSincoare izoqhubeka nokusungula futhi inwebise ngenkuthalo ibhizinisi lokuhlola le-POCT ukuhlinzeka "ngamathuba angenamkhawulo" eziguli ezinezifo ezingamahlalakhona kanye nabasebenza kwezokwelapha nakwezempilo.
Ikhasi Langaphambili: I-SARS-Cov-2 Antigen Test Kit & Neutralizing Antibody Test Kit zivunyelwe Ukuthekelisa
Ikhasi elilandelayo: Umcimbi Oqeda Isisekelo weSinocare iPOCT Industrial Park Project